Estram စက်ရုံသည် 65 ယာဉ်မောင်းများကိုဝယ်ယူမည် - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 EskisehirEstrada ကျွန်မရဲ့စီးပွားရေး 65 ယာဉ်မောင်းများ၏ဝယ်ယူ Make မှ
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, ငါ ESTRADA, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Institute, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ငါ estrada စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ sofar ပညာရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 65 ကားမောင်းသူစုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုသတင်း duyurdu.al အခြေအနေများနှင့် application လိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ပြုလိမ့်မည်။
IŞKUR Estrada ကျော်ထုတ်ဝေငါ၏အသစ်ကိုကြော်ငြာEskişehirမြူနီစီပယ်အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီး 65 လုပ်ဖို့ drivers တွေကိုစုဆောင်းနေဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ 65 စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းခုနှစ်တွင်အလုပ်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသတိပေးချက်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံသည်။ များကိုဦးမှဖန်ဆင်းခံရဖို့နှင့်ယာဉ်မောင်း၏အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသတင်း၏အဆက်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ရည်ညွှန်း related ကြော်ငြာများ၏စည်းကမ်းချက်များမှာတည်ရှိပါတယ်။
Psycho စာရွက်စာတမ်းရှိခြင်း, SRC2 နှင့် SRC4 စာရွက်စာတမ်းများရှိခြင်း, စနစ်ဟောင်း E-Class ကိုတစ်အတန်းအစား D ကိုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့စနစ်သစ်အတွက်အနည်းဆုံးမူလတန်းကျောင်းတွင်ဖြစ်ခြင်း, အထီးဖြစ်ခြင်း, ယာဉ်မောင်းရဲ့စုဆောင်းရေးကြော်ငြာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုလိုအပ်သောအခြေအနေများအကြားတူရကီနိုင်ငံသားများဖြစ် Related မြူနီစီပယ်, အလုပ်တခုကို ပြည်နယ်ဆေးရုံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဖြည့်ဆည်းရန်မမအတားအဆီးကိုလည်းလိုအပ်သောပစ္စည်းများဖော်ပြထားသောအရည်အချင်းများမှ xnumx't သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် 24.08.2018 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 2018 / 11608 ဥပဒေများအပေါ်တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာလက်ခံရရှိသည့်ခြေစစ်ပွဲကော်မတီကအစီရင်ခံစာ၏ရွေးဖြစ်လိမ့်မည်။
ရည်ညွှန်း၏စည်းကမ်းချက်များဝန်ခံချက်များအတွက်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းစုဆောင်းမှုကြော်ငြာအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပေးရန်လိုအပ်သည်လူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်လွှာတင်ရာအရပ်ကိုလုပျငနျးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး 1 နှစ်ပေါင်း Eskisehir ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကိုလည်းဆည်းကပ်နေသည်ဖြစ်စေမည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်နှင့်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများရ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဝယ်ယူ Make မှဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ ESTRAM န်ထမ်းအဖြစ် 18 08 / 02 / 2019 ESTRAM (Eskişehirမြူနီစီပယ်) ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ 18 ဧည့်ခံရည်ညွှန်း၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်ကွပ်မျက်စီစဉ်ထားသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖေဖော်ဝါရီလ92019 ယနေ့အထိလုပ်ရပါမည်။ ESTRAM အလင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး (Eskişehir) 18 စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းအဖြစ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ နှစ်စဉ်လိုင်စင်ရှိသည်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်ထားနိုင်အနည်းဆုံး 1 ။ Eskisehir ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်မှာအမှုဆောင်မည်ဧည့်ခံဝန်ထမ်းများအများပြည်သူကဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ 05 / 30: 13 နှင့် 00: 13 / 00: သူတို့အကြားဆိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ 21 နာရီ ESTRAM ဝန်ထမ်းများစဉ်ဆက်မပြတ်ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ 00 ဖြစ်လိမ့်မည်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တူရကီနိုင်ငံသား ...
အလုပ်-site ကိုဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ ESTRAM အတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် 22 / 03 / 2019 Eskisehir အမှုဆောင်, ကုမ္ပဏီအတွင်းလုပ်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကြီးများ၏အရေအတွက်ကိုစုဆောင်း, က Teo နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းနိုင်ငံသားများမှတင်ပြခဲ့သည်။ Eskisehir အတွက် operating စန်းအတွက် ESTRAM အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေး။ နေကြပါပြီ။ ကုမ္ပဏီခုနှစ်တွင် Inc ကို Eskisehir ၏ပြည်နယ်လုပ်ပါလိမ့်မည်တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့န်ထမ်းတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ဝယ်ယူကြေညာခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းများ ESTRAM ဝန်ထမ်းများခွဲဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောသည်သတ်မှတ်ခြင်းများအတွက် 14 လူကစားသမားအဖြစ်ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ၏ခေါင်းစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်ဆိုက်မှာအလုပျလုပျပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများ 14 ထိုင်ခုံနေရာဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းတာဝန်များကိုသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်အပြီးအပိုင်အလုပ်၏သဘောသဘာဝဆုံးဖြတ်သည်။ သူတို့ကeလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဘတ်စ်ကားများ၏ယာဉ်မောင်းအဖြစ်အစေခံလိုသော ESTRAM In-အိမ်သူအိမ်သားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေး ANKARAY အထွေထွေအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထောက်ပံ့ကုန်ယောဘကိုထမ်းခေါ်ယူမှုပိုင် 15 / 10 / 2015 ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စီးပွားရေးနှင့် ANKARAY စီးပွားရေးအထွေထွေစီးပွားရေးလုံခြုံမှုထောက်ပံ့ကုန်ထမ်းခေါ်ယူမှုယောဘ, အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေကုန်စည်ဧည့်ခံ 4734 အမှတ် 19 ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအားဖြင့်ပွင့်လင်းနူးညံ့ပိုင်၏ AIT အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးအတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးမှတူရကီက Metro စီးပွားရေးနှင့် ANKARAY စီးပွားရေးန်ထမ်းများ ဒါဟာနည်းလမ်းအားဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 121118 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓါတ်လှေကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည် (တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လခြမ်းနီအိမ်ခြံမြေအိမ်ခြံမြေ ANKARAY ဘူတာ ASTI) 27 / 05 / 2015 ဓာတ်လှေကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်စခန်း3အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စစ်ဆင်ရေးလခြမ်းနီဘူတာနှင့် ANKARAY စီးပွားရေးAŞTİ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုမိပါလိမ့်မည်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ဓာတ်လှေကားဆောက်လုပ်ရေးသက်တမ်းတိုးပိတ်ထား (သုံး) အပိုင်းပိုင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 44990 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.t ဃ) ...
Nexans တူရကီ, မူပိုင်ခွင့်mobıwayမိတ်ဆက်နယူးကြိတ်စက် Kit
CHP ဂုရ, Nigde တူရကီကားလမ်းစီမံကိန်းဝန်ကြီးများ Verdi ဖြေတောင်းဆို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေး ANKARAY အထွေထွေအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထောက်ပံ့ကုန်ယောဘကိုထမ်းခေါ်ယူမှုပိုင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓါတ်လှေကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည် (တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လခြမ်းနီအိမ်ခြံမြေအိမ်ခြံမြေ ANKARAY ဘူတာ ASTI)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓါတ်လှေကားတည်ဆောက်ထားကြလိမ့်မည် (တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လခြမ်းနီအိမ်ခြံမြေအိမ်ခြံမြေ ANKARAY ဘူတာ ASTI)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓါတ်လှေကားတည်ဆောက်ထားကြလိမ့်မည် (နှင့် ANKARAY တူရကီက Metro အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု)